Xavi Hernández oo gudoonsiiyay Lionel Messi abaal marinta xidiga bisha ee horyaalka La Liga – Gool FM
Xavi Hernández oo gudoonsiiyay Lionel Messi abaal marinta xidiga bisha ee horyaalka La Liga
(Barcelona) 20 Maajo 2018. Xidiga kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa gudoomay abaal marinta xidigii ugu fiicnaa bishii April lasoo dhaafay ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Kahor inta uusan bilaawan kulanka haatan ka soconaya garoonka Cump Nou ee Real Sociedad, halyayga kooxda reer Catalonia ee Xavi Hernández ayaa gudoonsiiyay Lionel Mess abaal marinta uu ku guuleestay ee ciyaaryahanka ugu fiican bisha.
Bishii April, Messi wuxuu dhaliyay lix gool afar kulan ee horyaalka Spain ah, Barcelona ayaa guul gaartay saddex kulan, halka hal kulana ay gashay barbaro.
Messi ayaa ku soo bilaawaday kulanka Real Sociedad kursiga keydka ee kooxda Barcelona, waxaana la filayaa in lagu badalo Andres Iniesta si uu u gudoomo calaamada kabtanimada uu ku hogaamin doono Barca xili ciyaareedka xiga, kadib bixitaanka Iniesta.
Thomas Tuchel oo sheegay inuu durbaba la kulmay Neymar Jr (Maxay ka wada hadleen?)
Inter Milan oo usoo Baxday Tartanka Champions League Lix sano Kadib+SAWIRRO